Podcast 12 × 32: ny iPad Pro dia mendrika bebe kokoa | Avy amin'ny mac aho
Tamin'ity herinandro ity tao amin'ny podcast Apple dia niresaka lava momba ny Apple iMac vaovao izahay, mizara ny iraka anananay an'ireo fitaovana Apple vaovao ireo. Raha ny lojika dia miresaka momba ny iPad vaovao ihany koa isika Araka ny asehon'ny lohatenin'ny podcast azy, ny iPad Pro dia mandray andraikitra lehibe kokoa noho ny processeur M1 azy, processeur izay ampiasain'ny solosaina ankehitriny toa ny iMac, MacBook Pro 13-inch ary Mac mini.
Izany no horonantsary podcast omaly fa tena velona tao amin'ny fantsona YouTube anay izahay:
Ity no rohy hidiranao fantsona YouTube anay ary afaka manaraka anay amin'ny fizarana manaraka mivantana ianao na afaka mankafy ny podcast navoaka tao iTunes for henoy izany isaky ny toerana sy toerana tianao.
Raha manana fanontaniana na tolo-kevitra ianao ary mieritreritra ianao fa afaka manome hevitra momba izany amin'ny podcast ianao dia afaka manao izany mivantana amin'ny alàlan'ny chat azo amin'ny YouTube, amin'ny alàlan'ny tenifototra #podcastapple ao amin'ny Twitter na avy any fantsona Telegram anay Marihina fa maimaim-poana ho an'ny rehetra izany ary mihamaro hatrany isika.
Ary averinay ihany koa ny misaotra ny olona rehetra manatrika ny orinasa miaraka amin'ireto matotra matotra ireto, Mihamaro ny mpampiasa no mivory mivantana aminay ary manontania anay mivantana momba ny fandehan-javatra teknolojia an'ny Apple, ny vokatra avy aminy ary koa ireo olana hafa izay tsy misy ifandraisany mivantana amin'i Apple. Ho an'ny ekipa dia tena izy fahafinaretana hizara ny zavatra niainantsika rehetra ary hahafantatra ny anaoManantena izahay fa ity vondrom-piarahamonina mpampiasa ity dia tsy mitsaha-mitombo isan'andro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Podcast 12 × 32: mendrika bebe kokoa ny iPad Pro
macOS Catalina dia havaozina amin'ny kinova 10.14.7